मधेसमा ओलीलाई सिके राउतको साथ, हात मिलाउँदै यसरी गरे साथ दिने बाचा! – PathivaraOnline
Home > समाचार > मधेसमा ओलीलाई सिके राउतको साथ, हात मिलाउँदै यसरी गरे साथ दिने बाचा!
मधेसमा ओलीलाई सिके राउतको साथ, हात मिलाउँदै यसरी गरे साथ दिने बाचा!
admin January 9, 2021 समाचार	0
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रुपमा विभाजन भएसँगै मधेसमा आफ्नालागि ‘स्पेस’ खोजिरहेका छन् । आफ्नो राजनीतिक छवि मधेसविरोधी भएकै कारण उनका लागि तराई मधेसमा अनुकुल राजनीतिक वातावरण बन्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीलाई यतिबेला सिके राउत अध्यक्ष रहेको जनमत पार्टीले तराई मधेसमा राजनीतिक स्पेसका लागि सघाइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद विघटन गरेकै दिन जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मोहम्मत अब्दुल खानले विज्ञप्ति जारी गरी संसद विघटनको घटनालाई ‘दुःखद्’ भनेका छन् । तर त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सो कदमका विरुद्ध जनमत पार्टी रहस्यमय रुपमा मौन बसेको छ । बरु सो पार्टी जोडतोडका साथ चुनावको तयारीमा लागेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै जनमत पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘नेपालको संघीय सदन कार्यकालभन्दा अगाडि नै विघटन हुनु नितान्त दुःखद् घटना हो । यस विषयमा हाम्रो पार्टीले संविधानविद्हरूसँग परामर्श लिइराखेको अवस्था छ । साथै पार्टीको स्थायी समितिले समेत यस विषयमा छलफल गरिराखेको छ ।’
जनताले मत र विश्वास दिएर पठाएका पार्टीहरू देश, प्रदेश र स्थानीय तहहरू चलाउन पूर्ण रूपमा असफल भएको उल्लेख गर्दै जनमत पार्टीले भ्रष्टाचारलाई घर–घरमा पु-याएको, भागबण्डा र आपसी लुछाचुँडीको राजनीतिले देशलाई बन्धक बनाएको कुराको परिणामकै रूपमा संघीय सदन विघटन हुनुपरेको ठहर गरेको थियो ।
पटक–पटक परीक्षण भएर असफल भइसकेका भ्रष्ट पार्टी र नेताहरूलाई आगामी निर्वाचनमा परास्त गर्दै जनमत पार्टीलाई भारी बहुमतले जनादेश दिएर स्वराज कायम गर्न जनतासँग सो पार्टीले अनुरोध पनि गरेको छ । जिल्ला, पालिकाहरुमा अधिवेशन गर्दै चुनावको तयारीमा जुटिसकेको जनमत पार्टीले मधेसमा आन्तरिक रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सघाइरहेको तथ्यलाई सो विज्ञप्तिले पनि संकेत गरेको छ ।
नेपालबाट मधेसलाई अलग गरेर छुट्टै देश बनाउनुपर्ने भन्दै सिके राउतले लामो समय अभियान नै सञ्चालन गरेका थिए । सोही अभियानको क्रममा उनी पक्राउ परेका थिए । उनी जेलमै रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले उनीसँग सहमति गर्दै उनलाई आफ्नो पक्षमा पारेका थिए । सिके राउतले त्यही बेला नै विखण्डनको राजनीति छाडेर मूलधारको राजनीतिमा आउने निर्णय गरेका थिए । सरकारसँग सम्झौता भएपछि बाहिरिएका सिके राउत त्यसयता निरन्तरजसो प्रधानमन्त्री ओलीको सम्पर्कमा रहेको बताइन्छ ।
अन्जु पन्त छोरीकै इच्छा पूरा गर्न पनि दोस्रो विवाह गर्दै…
यस्तो सुन्दर बन्यो झापामा बोतलै बोतलले बनेको घर, हेर्न आउनेको भिड (भिडियोसहित)
जागे रौतहटवासी! भारतले हेपेर बनाउँदै आएको बाँध निर्माण एकाएक यसरी रोके!